China Aluminium foil tape factory sy mpanamboatra | Newera
Volafotsy marevaka, mahatohitra UV, tsy may afo, sns
Ekeo ny OEM
Omeo santionany maimaim-poana, ny entana dia tokony aloan'ny mpividy
Ny hatevin'ny lamosina (mm)
Ny hatevin'ny fametahana (mm)
Ny data dia ho fanovozan-kevitra fotsiny, manolotra ny mpanjifa izahay fa tsy maintsy manandrana alohan'ny hampiasana azy.
Ny vokatray dia efa nandalo ISO9001, SGS, ROHS ary andiana rafitra fanamarinana kalitao iraisam-pirenena, ny kalitao dia azo antoka tanteraka.
Endri-javatra sy ny fampiharana
Ny foil vita amin'ny aliminioma no fitaovana manta sy fanampiana fanampiny ho an'ny vata fampangatsiahana sy ny vata fampangatsiahana. Izy io koa dia fitaovana tsy maintsy vidiana ho an'ny departemantan'ny fizarana fitaovana insulation thermal. Ampiasaina be izy io amin'ny vata fampangatsiahana, compresseur rivotra, fiara, petrochemical, tetezana, hotely, elektronika ary indostria hafa
Volafotsy marevaka, mahatohitra UV, tsy may afo
Izy io dia azo ampiasaina amin'ny insulate heat ary ny fatorana insulation taratra mangatsiaka, azo ampiasaina amin'ny fantsom-panafody, mpanohana ny motera, ary azo ampiasaina hamonosana tariby hisorohana ny hafanana, tsy tantera-drano ary tsy misy vovoka, sns.
Fiarovana elektromagnetika, fanoherana ny taratra, fanoherana
Fonosana vokatra elektronika, miaro amin'ny taratra
Tombo-kase tombo-kase famehezana mafy, fanoherana ny hafanana avo tsy mora milatsaka
Azo ampiasaina amin'ny fanamboarana vy, plastika, seramika ary fitaovana hafa
1. Traikefa an-taonany
4. Omeo santionany maimaimpoana
Previous: Fandraisana an-tsoavaly kasety matevina matevina mahery
Manaraka: Tape vita amin'ny varahina